Garsooraha Magaca Fikradaha Aragtida Dhagaystayaasha | Martech Zone
Talaado, Agoosto 11, 2009 Axad, Abriil 24, 2016 Adam Yar
Markaad xukuntid magacaabista fikradaha, maskaxda ku hay khibrada dhabta ah ee adduunka, ha u noqon khibrada beenta ah ee bandhigyada hal abuurka ah. Waa tan sheyga, markii aad dhahdo ama aad u muujiso fikrad magac qof kale iyadoo ujeedadu tahay inaad hesho iibsasho ama jawaab celin, iyadu ma lahan khibrad la mid ah tan ay yeelan doonaan macaamiisha goobta ku sugan.
Markaad soo bandhigto fikradaha magaca, macmiilkaaga ama qofka kula shaqeeya wuxuu yeelan doonaa maskaxdeeda miyir qabta, ee caqli gal ah. Waxay ka fikiri doontaa, "miyaan ka helay?" Dabeecadani kuma habboona khibrada khibradeed, macaamiisha, maalgashadayaasha, shaqaalaha, tabarucayaasha, adeegsadayaasha (iyo wixii la mid ah).
Sidoo kale, maskaxda ku hay in dadka kaliya ee ku jira astaamaha sumcadda iyo suuqgeynta ay waqti badan ku lumiyaan kala qaadista faa'iidooyinka iyo khasaaraha magac. Hagaag, magacu haduusan runti xumaan, maahan. Markaa waxaad ka heli kartaa Joe Consumer oo xaflad yar oo jeesjees ah ku bixinaya kharashkaaga. Laakiin haddii magacaagu ku habboon yahay istiraatiijiyaddaada astaanta ah ee si taxaddar leh loo tixgeliyo, celceliska rajada kuma bixinayo hal millisekond dhaliil macquul ah
Xaqiiqdu waxay tahay dadku inay la kulmaan magacyo heer miyir-qab ah, heer shucuureed. Aynu dhahno hadalkaaga wiishka wuxuu u socdaa sida:
Haye, waxaan ahay Jan Smith, lataliye mashiinka raadinta Gazillions. Waxaan dadka ka caawiyaa inay dhex socdaan shabakadda markay raadinayaan nooca saxda ah ee macluumaadka.
Dhegeystuhu ma fakarayo:
Miyaan jecelahay magacaas? Micno ma samaynaysaa? Qof kastaa ma jecel yahay magacaas? Magacaasi ma sheegayaa sheekada shirkaddan oo dhan.
Maya, dhagaystuhu wuu ka baaraandegayaa wixii aad u sheegtey oo dhan (oo laga yaabee inuu kaa baaraya tilmaamo uu kugu aamini karo dhammaantiin isagoo dhex maraya liistada 20 waxyaabood oo uu u baahan yahay inuu sameeyo maalintaas dambe.) Ganacsigaaga ama magacaaga sheyga waa hal macluumaad oo yar. Markay maskaxdu qabato, waxay u shaqaysaa inay iskaaniso faylasha gudaha waxa magaca u noqon karo ama ka duwan yahay iyo shucuurta la xidhiidha. Maskaxdu waxay diiwaangelin kartaa hits deg deg ah sida:
Gazillions. Taasi waa wax badan. Waxay u egtahay nooc madadaalo ah. Caadi ma ahan. Khatar baa laga yaabaa. Waa in badan dhegeystaa.
Sinnaba uma dhihi karo magacu muhiim maahan. Xaqiiqdii, waa qayb muhiim ah oo ka mid ah nidaamka calaamadaha calaamadahaaga. Magaca ayaa dejinaya cod ama wuxuu bixinayaa macluumaad ama labadaba. Sida astaan ​​ama lambarro kale oo taabasho ah, magac waa barta laga soo galo sawirrada iyo dareenka ay dadku ka sameysan doonaan hareerahaaga, shirkaddaada, wax soo saarkaaga, iyo adeegyada.
Ujeeddadaydu runtii waxay ku saabsan tahay bay'ada macmalka ah ee dib-u-eegista hal-abuurka ah. Haddii aad adigu sameyneyso, la shaqeynta la-taliye ama aad tahay la-taliye, waa inaad ku soo koobtaa aragtidaada aragtida qofka qaata farriinta. Haddaba fadlan, bax oo magac weyn u yeel naftaada.
Tags: brandbrandingekspertenmagaca shirkaddamagacamagacyadamagaca alaabta
Jawaab aad u kala duwan ayaan lahaan lahaa tan kahor intaanan aqrin Blink (buuga uu qoray Malcolm Gladwell). Asal ahaan waxay jebisaa xukunnada degdegga ah ee aan maalin walba qaadanno.
Kahor intaanan akhrin Blink waxaan dhihi lahaa "weydii dad farabadan oo fiiri midka ay u maleynayaan inuu ugu fiican yahay" laakiin geeddi-socodkeena go'aan-qaadashada ayaa runtii aad uga sii hooseeya. Way ka sii dhib badan tahay inaad sameyso go'aannada suuq-geynta markii aad tan ka fiirsato.
Aniga ahaan, Blink wuxuu ii ahaa sida geedka aqoonta ee Kitaabka Quduuska ah. Ma hubo inaanan doorbidi lahayn mugdiga.